Wasiirka Warfaafinta Puntland oo ka warbixiyay kulan ay yeesheen golaha wasiirada PL – SBC
Wasiirka Warfaafinta Puntland oo ka warbixiyay kulan ay yeesheen golaha wasiirada PL
Wasirka warfaafinta Puntland Axmed Cali Askar ayaa maanta Shir Ja’raid oo uu ku qabtay Xarunta Madaxtooyada waxa uu kaga warbixiyay Shirkii Golaha wasirada ee malintii shalay ahayd ay ku yeesheen Xarunta Madaxtooyada Garowe.
Shirkaasi ayaa waxaa shir Gudoominayey Madaxwaynaha Puntland C.raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole waxaana looga wada hadlay arimo badan oo ay ka mid ayaaheen Arimaha Amaanka, Dadka Barakacaasha ah ee ku soo qulqulaya Puntland iyo Arimaha dhalinyarada Burcad badeeda ah.
Inta badan wasirku waxaa uu sheegay in Shirkii Golaha wasirada lagu soo qaatay Arrimaha dhalinyarada iyo sidii looga wacyi gelinlahaa inta ku jirta Burcad badeeda looguna abuuri lahaa shaqooyin iyo waxyaabo ay arinkaasi isagaga daayaan ,
Waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in Puntland ay cafis u fidisay dhalinyarada Burcada ku jirta ee isaga soo baxa .
Arimaha Dadka barakacayaasha ah ayaa lagu soo qaaday kulankaasi waxaana looga wada hadlay sidii dadkaasi looga qeyb qaadan lahaa dib u dejintooda iyo weliba taakuleyn loo fidiyo.
Marka laga yimaado kulankan golaha wasiirada ayaa waxaa jirtay Maalmihii ugu dambeeyay dhacdooyin dhanka amaanka wax u dhimaya oo ka dhacay Magaalooyinka waaweyn ee gobolka kuwaas oo lagu beegsaday saraakiil ka tirsan dowlada Puntland, iyadoo aan jirin ilaa iyo iminka cid ka tirsan maamulka oo ka hadashay iyo cid loo soo qabqabtay.